Maxamed iyo Florence: Nin Soomaali ah oo haweeney 30 sano ka hor badbaadisay dib u soo raadiyay | Dayniile.com
Home Warkii Maxamed iyo Florence: Nin Soomaali ah oo haweeney 30 sano ka hor...
Maxamed iyo Florence: Nin Soomaali ah oo haweeney 30 sano ka hor badbaadisay dib u soo raadiyay
Kalmadda mahadsanid eray ahaan way koobantahay balse micno ahaan waa kalmad ballaaran oo qofka lagu dhahayana tusinaysa wixii uu qofka ku oranaya u taray halka qofka adeegsanaya uu dareemayo in qofkaasi uu muteystay maadama wax uun uu taray.
Haddaba Maxamed Jaamac Maxamed oo ah ninka sheekaddaan saldhiga u ah wuxuu Soomaaliya ka soo qaxay markii ay dowladdii Soomaaliya ay dhacday sanadkii 1991-dii.
Xiligaas Maxamed wuxuu ka shaqeynayay wasaaraddii beeraha isaga oo ka howlgalayay goallada koofurta, wuxuuna ku jiray wakhtigisii dhalinyaranimada.
Balse nasiib darro wuxuu habeen habeennada ka mid ahaa si lama fillaan ah ugu dhaawacmay fuusto uu ka shubayay shidaal oo sida uu sheegay u ka codsaday nin saaxiibkii ahaa inuu arrintaa ku caawiyo hase yeeshee isaga oo shubaya shidaalkii ayaa qof kula soo dhawaaday Faynuus iftiin ahaan loo isticmaalayay taas oo qabsatay gaaskii sababtayna in Maxamed Jaamaca Maxamed uu dhaawac ka soo gaaro qaybo badan oo jirkiisa ka mid ah gaarahaanna wajahadda hore.
Maadaama xilliga uu dhaawacmayo Maxamed uu dalku ku jiray jahawareer siyaasadeed isla markaana dadkii ay qaxayeen ma aysan jirin meel xaalladiisa caafimaad wax looga qaban karay wuxuuna ka mid noqday dadkii ugu horreeyay ee ka soo qaxay magaalada Kismaayo halkaa oo isaga iyo dad kale ay ka soo raaceen Markab ugu dambeyntii geeyay dalka Kenya.
Tagitaankii dalka Kenya ka dib maxaa dhacay?
Isaga oo dhaawac ah safarana uu soo galay ayuu gaaray Kenya kadibna maadama uu dareemayay xanuun wuxuu durba bilaabay inuu raadiyo meel xaalladiisa caafimaad lagu daryeello waxaana xusid mudan in xanuunka ay u dheered gacan marnaan oo ma uusan haysan wax qarash ah oo xaalladiisa caafimaad wax looga qabto.
Magaalada Nairobi markii uu tagay dad ayaa kula taliyay Maxamed inuu aado magaalada Siyellow,ee bartamaha dalka Kenya halkaa oo loogu sheegay inuu ka heli karo Isbitaal xaaladdiisa lagu dabiibo.
“Nairobi ayaan imid markii aan joogay hal toddobaad, ilaa laba asbuuc ayaa dad igula taliyeen in aan aado Siyellow oo la iigu sheega in aan ka heli karo dhaqtar wanaagsan”, ayuu yiri Maxamed.
Waa halka uu kula kulmay Kalkaalisada caafimaad ee muddo uu ku raadinayay Mahadcelinta
Markii uu tagay Siyellow, wuxuu galay Isbitaalkii waxaana lagu sameyay qalliin iyo dhayitaan maadaama qaybo ka mid ah jirkiisa uu gubtay.Maxamed wuxuu halkaa kula kulmay haweeney lagu magacaabo Florence Lintari oo Kenyaan ah oo xiligaa kalkaaliso ka ahayd Isbitaalka taas oo u gashay Maxamed abaal iyo naxariis uu hilmaami kari waayay.
Mar Maxamed Jaamac uu sharaxyay qaabka uu ula kulmay Florence wuxuu yiri: “Markii aan tagay Siyellow waxaan halka kula kulmay gabar kalkaaliso ah oo si aad iyo aad ah naxariis fara badan iigu muujisay,naxariistii waxaa ka mid ahaa in ay markiiba garatay in aan ku hadlin luuqadda Sawaaxiliga iyo luuqadda deegaanka waxayna mar walba iga waraysan jirtay xaalladeyda”.
Waxaa Intaas dheeraa in mar kasta oo ay shaqada tagayso Florence Lintari ay Maxamed u keeni jirtay khudaar iyo waxyaabo cuno maadaama uu meesha kaligii ku ahaa isla markaana aaney jirin cid wxa u keenaysa ama soo booqanaysa.
Sidoo kale dadka bukaannada ah ee Isbitaalka jiifa waxaa laga qaadi jiray hebeenkii xiligaas lacag boqol Shiling ah oo kenya ah (100 ) una dhiganta hal doolar ($1) taas oo markaa uusan awoodin Maxamed,balse Florence Lintari ayaa kala hadashay mamaulkii Cisbitaalka una sheegtay in lacagta laga dhaafo Maxamed maadaama uusan awoodin cid caawisaana aaney deegaanka u joogin.
“Cisbitaalku wuxuu qaadan jiray oo dadka bukaanka ah ka qaadan jiray lacag aan aad u badneyn lacagtii waxay ku dadaashay kalkaaliso Florence intay u tagtay ilaa dadkii maamulka hayay in la iga dhaafo sababtoo ah waxaan ahaa nin qaxooti ah dadna aan haysan” ayuu yiri Maxamed Jaamac Maxamed oo sheekadiisa BBC-da la wadaaga
Dib u raadintii kalkaalisadii caawisay kolkii xaalladu ku adkeyd
Aadumuhu isku mid maaha oo inta badan wax walba way ku kala duwanyihiin sida arrintaan oo kale oo ah in Maxamed Jaamac Maxamed aanu hilmaamin haweenaydii caawisay xilligii adkaa. Maxamed Jaamac wuxuu bilaabay inuu dib u raadiyo Florence Lintari kalkaalisadii ka howlgalaysay Cusbitalkii Siyellow ee u dhigatay abaalka quluubtiisu ay had iyo jeer ka ahaan waydo.
Sheekadiisa Maxamed wuxuu la wadaagi jiray saaxiibbadiis iyo dadka kale wuxuuna mar walba dadka waydiin jiray Florence cid garanaysa haddii ay jirto si uu ugu mahadceliyo oo ugu yiraahdo waad mahadsantahay maadaama aad xili adag isoo gacan qabatay wuxuuna intaa raaciyay in sheekadiisu ay noqtay mid muhiim ah taariikhdiisa oo kaga duwan dhacdooyinkii kale ee uu la so kulmay.
Sidee isku helleen Maxamed iyo Florence?
Inuu dib u helo Florence Lintari Maxamed Jaamaac waxay ku qaadatay in ka badan 30 sano, oo uu ku jiray waydiinteeda iyo wax ku saabsan halkii ay ku dambeysay hase yeeshee muddo hadda laga joogo laba bilood iyo xoogaa ayuu si lama fillaan ah ku helay xiriirka haweenadii uu malmaha iyo habeennada badan doondoonayay si uu ugu mahadnaqo.
Nin saaxiibkii ah iyo gabar la socotay ayaa Maxamed oo ku nool hadda dalka Mareykanka gurigsiisa ugu tagay kadibna gabadhii ayay is barteen waxayna u sheegtay in ay deganaan jirtay Siyellow, wuxuuna la wadaagay sheekadii markii uu Siyellow tagay sanado badan ka hor isaga oo dhaawac ahaa kalkaalisadii garab istaagtayna uu raadinayo.
Gabdhii ayaa u sheegtay Maxamed in ay u raadinayso gabadhaas isla markaana waxay u ballan qaaday in ay si walba isugu dayayso in ay keento xiriirka iyo halka laga heli karo Florence.
Gabadhii waxay gashay dadaal dheer ugu dambeyna waxay keentay Telefoonka gacanta ee Florence Lintari oo howlgab ka noqtay shaqdii kalkaalisnimada kuna nool ismaamulka majaakoos ee dalka Kenya.
Isaga oo ka jawaabayay sida ay u wada xiriireen ayaaa waxa auu yiri: “Waan wacay markii aan teleefoonkeeda helay kadibna waa la igu dhigay waxaan gartay inaaney garanin, fariin ayaan u qoray fariinta waxaan ugu qoray ima garanaysid soddon sanadood ka hor ayaynu kulanay Cusbitaalka Siyellow markada kalkaalisada ka ahayd ayaan bukaankaada ahaa si fiican ayaad ii caawisay maana ilaawi karin xusuutaada soddon sanana waan ku raadinayay waxaan doonayay in aan ku iraahdo waad mahadsantahay”.
Intaas kadib Maxamed Jaamac Maxamed wuxuu go’aan ku gaaray inuu baxo oo uu tago dalka Kenya si uu hor fariisto isla markaana uu waji-ka waji ugu yiraahdo Florence Lintari “Mahadasanid”taas oo ugu dambeyn u suurta gashay ayna ku kulmeen Kenya.
Florence Lintari Sidee u aragtay dib ula kulmidda bukaan ay 30 ka hor caawisay?
Waxay sheegtay in markii uu la soo xiriiray Maxamed ay dareentay faraxd hase yeeshee waxay xustay in markii hore aysan si wanaagsan u xasuusan balse markii uu sharaxaad siiyay oo dib u xasuusiyay wanaagii iyo garab istaageedii ay garowsatay.
“Markii uu isoo wacay wuxuu ii sheegay inaan caawiyay xiligii aan kalkaalisada ka ahaa soddon sano ka hor Cusbitalka Siyellow, xilligaas uu gubtay wuxuuna ahaa qoxooti aan si wanaagsna u daryeellay sidaasi ayuu ii sheegay wuxuuna i xasuusiyay wax aan fillayo in aan u sameeyay isaga markaa kadib waan xasuustay inuu ahaa isaga mar hore ayayna ahayd,” ayay tiri Florence Lintari.
Florence Lintari waxay sheegtay in dad badan ay caawisay sida Maxamed oo kale muddadii ay ka shaqeynaysay arrimaha caafimaadka hase yeeshee waxay intaa raacisay in aysan qaar badan xasuusan marka laga yimaado Maxamed oo isagu soo raadiyay si uu ugu mahadceliyo.
Maxamed wuxuu aas-aasay urur lagu magacaabo Hepto oo ka shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo sidii dadka danyarta ah ee u baahan gacan-qabashada u heli lahaayeen adeegyo caafimaad taas oo si wada jir ah looga qayb qaadanayo, waxaana ururkaan dadka ka shaqeeya ka mid ah Florence Lintari oo sabab u ahayd in Maxamed uuba sameeyo urur ka qayb qaata caawinta dadka caafimaadka u baahan.
Hadda oo uu ku noolyahay dalka Mareykanka Maxamed wuxu ka shaqeeyaa arrimaha caafimaadka.
Previous articleWar deg deg ah: Cabdi xaashi oo Noqday Senetarkii ugu horeeyay ee Gobolada Waqooyi oo Cod gacan tag ah ku soo baxa.
Next articleProf Cabdi Ismaaciil Samatar. Oo ka mid noqday kuraasta Aqalka Sare ee Gobolada Waqooyi
Korneyl Maxamuud Xasan Ibraahim (Baakaay) oo ah taliyaha guutada shanaad, qaybta 21 aad ee ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed oo la hadlay Shabakadda dayniile ayaa...
Khasaaro ka dhashay Ciidamo saarnaa Gaari oo Qarax xoogan lala beegsaday
Guddiga doorashooyinka Heer Federaal oo kormeeray mid kamid ah Goobaha lagu...
QM iyo Midowga Yurub oo war kasoo saaray xaalado kusoo wajahan...